တော မီး အကြီးအကျယ် လောင်နေ တဲ့​ အပြင် ရာသီဥတု ဆိုးရွားနေ တဲ့ ဩစတြေးလျ က ပုံရိ ပ်များ – Shwewiki.com
တော မီး အကြီးအကျယ် လောင်နေ တဲ့​ အပြင် ရာသီဥတု ဆိုးရွားနေ တဲ့ ဩစတြေးလျ က ပုံရိ ပ်များ
January 21, 2020 By admin News
မကြာေ သးမီက သြစတြေးလျမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ တောမီးက တကယ့်ကိုကြောက်မက်ဖွယ်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာပါ..တိရစ္ဆာန်သန်းနဲ့ ချီသေဆုံးခဲ့ရသလို လူပေါင်းများစွာလည်း ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရပါတယ်…
လက်ရှိမှာလည်း ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့ ဒေသတွေမှာ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ ဖုန်မှုန်နဲ့သဲမုန်တိုင်းများ တိုက်ခတ်ခဲ့လျက်ရှိပါတယ်…
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံရဲ့ အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမှာလည်း ကြီးမားတဲ့ မိုးသီးကြွေကျမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့က နိုင်ငံတောင်ပိုင်း မဲလ်ဘုန်းမြို့မှာ ကြီးမားတဲ့ မိုးသီးကြွေကျမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်မှာလည်း ညလုံးပေါက် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်…
ဒါ့အပြင် New South Wales ပြည်နယ်ရဲ့ အနောက်ပိုင်းဒေသတစ်ခုမှာလည်း လွန်ခဲ့အပတ်က သီတင်းပတ်ကုန်က ဖုန်မှုန်နဲ့သဲမုန်တိုင်းတွေ တိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်….
ဒီလို သဲမုန်တိုင်းတွေတိုက်တာကြောင့် နေ့လယ်ပိုင်းဟာ ညလိုပဲမှောင်မဲသွားခဲ့ပြီး ဒီတစ်ခါတိုက်ခတ်မှုတွေဟာ အရင်အကြိမ်တွေထက် ပိုမိုကြီးမားတယ်လို့ သိရပါတယ်…
မနေ့က ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့မှာလည်း မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ ကန်ဘာရာမှာ ကြီးမားတဲ့ မိုးသီးကြွေကျမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်…
တာဝန်ရှိသူတွေက ဒေသခံတွေကို သစ်ပင်တွေ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းတွေနဲ့ ဝေးတဲ့နေရာမှာ နေထိုင်ကြဖို့ သတိပေးမှုတွေလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်…
ပြင်းထန်တဲ့ တောမီးလောင်မှုကြောင့် တိရစ္ဆာန်သန်း ၄၈၀ ခန့် သေဆုံးခဲ့ရပြီး နေအိမ် ၂၀၀၀ ကျော် ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်…ကပ်ဆိုက်သလိုဖြစ်နေတဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေဟာ သြစတြေးလျမှာ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ဖြစ်နေတာကြောင့် တာဝန်ရှိသူတွေကလည်း အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ သတိပေးမှုတွေ မပြတ်ပြုလုပ်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်…
မကွာေ သးမီက သွစတွေးလမြှာ ဖွဈခဲ့တဲ့ တောမီးက တကယျ့ကိုကွောကျမကျဖှယျလောငျကြှမျးခဲ့တာပါ..တိရစ်ဆာနျသနျးနဲ့ ခြီသဆေုံးခဲ့ရသလို လူပေါငျးမြားစှာလညျး ဒုက်ခရောကျခဲ့ရပါတယျ…
လကျရှိမှာလညျး ဩစတွေးလနြိုငျငံရဲ့ ပူပွငျးခွောကျသှတေဲ့ ဒသေတှမှော ထိတျလနျ့ဖှယျရာ ဖုနျမှုနျနဲ့သဲမုနျတိုငျးမြား တိုကျခတျခဲ့လကျြရှိပါတယျ…
ဒါ့အပွငျ နိုငျငံရဲ့ အရှဘေ့ကျကမျးရိုးတနျးမှာလညျး ကွီးမားတဲ့ မိုးသီးကွှကေမြှုတှေ ဖွဈပျေါခဲ့ပါတယျ။ဇနျနဝါရီလ ၁၉ ရကျနကေ့ နိုငျငံတောငျပိုငျး မဲလျဘုနျးမွို့မှာ ကွီးမားတဲ့ မိုးသီးကွှကေမြှုတှေ ဖွဈပျေါခဲ့ပွီး ဗဈတိုးရီးယားပွညျနယျမှာလညျး ညလုံးပေါကျ မိုးသညျးထနျစှာ ရှာသှနျးခဲ့ပါတယျ…
ဒါ့အပွငျ New South Wales ပွညျနယျရဲ့ အနောကျပိုငျးဒသေတဈခုမှာလညျး လှနျခဲ့အပတျက သီတငျးပတျကုနျက ဖုနျမှုနျနဲ့သဲမုနျတိုငျးတှေ တိုကျခတျခဲ့ပါတယျ….
ဒီလို သဲမုနျတိုငျးတှတေိုကျတာကွောငျ့ နလေ့ယျပိုငျးဟာ ညလိုပဲမှောငျမဲသှားခဲ့ပွီး ဒီတဈခါတိုကျခတျမှုတှဟော အရငျအကွိမျတှထေကျ ပိုမိုကွီးမားတယျလို့ သိရပါတယျ…
မနကေ့ ဇနျနဝါရီ ၂၀ ရကျနမှေ့ာလညျး မွို့တျောဖွဈတဲ့ ကနျဘာရာမှာ ကွီးမားတဲ့ မိုးသီးကွှကေမြှုတှဖွေဈခဲ့ပွီး ထိခိုကျပကျြစီးမှုတှလေညျး ရှိခဲ့ပါတယျ…
တာဝနျရှိသူတှကေ ဒသေခံတှကေို သဈပငျတှေ လြှပျစဈဓာတျအားလိုငျးတှနေဲ့ ဝေးတဲ့နရောမှာ နထေိုငျကွဖို့ သတိပေးမှုတှလေညျး ပွုလုပျခဲ့ရပါတယျ…
ပွငျးထနျတဲ့ တောမီးလောငျမှုကွောငျ့ တိရစ်ဆာနျသနျး ၄၈၀ ခနျ့ သဆေုံးခဲ့ရပွီး နအေိမျ ၂၀၀၀ ကြျော ပကျြစီးခဲ့ရတယျလို့သိရပါတယျ…ကပျဆိုကျသလိုဖွဈနတေဲ့ သဘာဝဘေးအန်တရာယျတှဟော သွစတွေးလမြှာ ဆကျတိုကျဆိုသလို ဖွဈနတောကွောငျ့ တာဝနျရှိသူတှကေလညျး အန်တရာယျဖွဈနိုငျတဲ့ အခွအေနတှေကေို ရှောငျရှားနိုငျဖို့ သတိပေးမှုတှေ မပွတျပွုလုပျနရေတာပဲဖွဈပါတယျ…
စည်ပင်ဝန်ထမ်းတွေကြောင့် အရင်း အနှီးဖျက်စီး မှုကိုခံ လိုက်ရ တဲ့ အသီး သည်အဘ ကို ကူညီပေး မယ့် Sinon Loresca
မန္တလေး တွင် ဟိုတယ်ခန်း အတွင်း အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးနှ င့် အတူနေ သည့် အမျိုးသား အမောဖောက် သေဆုံးဟုဆို